शीर्ष नेताकै जिल्लामा कांग्रेस कमजोर:किन आएन अपेक्षित नतिजा ? – USNEPALNEWS.COM
शीर्ष नेताकै जिल्लामा कांग्रेस कमजोर:किन आएन अपेक्षित नतिजा ?
प्रदेश नं. २ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा शीर्ष नेताहरू रहेको जिल्लामा कांग्रेस कमजोर बन्न पुगेको छ । मतपरिणामअनुसार धनुषा, सिरहा, बारामा कांग्रेसले अनुमान गरेजति स्थानीय तहमा जित हासिल गर्न सकेन । धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकामा कांग्रेस उम्मेदवार साढे १० हजार मतले पराजित हुन पुगे ।
धनुषा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिको गृहजिल्ला हो । उनी टिकट वितरणमा हावी भएको नेताहरूको आरोप छ । आठ जिल्लाकै कांग्रेस सभापति निधि पक्षका हुन् । जसका कारण उनले आफूनिकटका नेतालाई टिकट दिए । तर, कांग्रेसको परम्परागत गढ मानिएको जनकपुरमै कांग्रेस भारी मतले पराजित हुन पुग्यो ।
०४९ को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसबाट उपमेयरको टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर उपमेयर बनेका लालकिशोर साहले यसपटक मेयरमा बाजी मारे । राजपाबाट उनले २१ हजार दुई सय ७७ मत ल्याए । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका मनोजकुमार साहले १० हजार ६ सय ३९ मत ल्याउन सके । धनुषा जिल्लामा निधि, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, महेन्द्र यादव, रामकृष्ण यादवजस्ता चर्चित नेता छन् ।
यस्तै, बारामा पनि कांग्रेस कमजोर बन्न पुगेको छ । फरमुल्लाह मन्सुर, उमाकान्त चौधरी, राधेचन्द्र यादव, शोभाकर पराजुलीजस्ता नेता भए पनि १६ मध्ये चारवटा तहमा मात्रै जित्यो । जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकामा कांग्रेस पराजित हुन पुग्यो । निर्वाचनको मुखसम्मै माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्ने प्रचार कांग्रेसबाटै भए पनि जम्मा दुईवटा तहमा घोषित तालमेल भयो । तालमेल भएकामध्ये बाराको निजगढ नगरपालिकामा मात्रै कांग्रेस उम्मेदवार विजयी भए ।
किन आएन अपेक्षित नतिजा ?
कांग्रेसले प्रदेश नं. २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये सयवटा तहसम्म जित्ने दाबी गरेको थियो । तर, नतिजा ४० तहको हाराहारीमा देखिएको छ । पहिलो र दोस्रो चरणमा एमालेभन्दा ५० तहमा पछि परेको कांग्रेसले प्रदेश नं. २ मा केही बढी तह जिते पनि अपेक्षित जित्न सकेन । नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी संस्थापनले टिकटमा आफूखुसी गर्दा धेरै ठाउँमा चुकेको टिप्पणी गरे । ‘हामी यति जितबाट सन्तुष्ट छैनौँ,’ पौडेलले भने, ‘पार्टी हचुवाका भरमा टिकट दिँदा हामी धेरै ठाउँमा हार्न पुग्यौँ ।’
पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकामा कांग्रेसले जित्ने वा नजित्ने अझै टुंगो छैन । बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगर र धनुषाको जनकपुर उपमहानगर कांग्रेसले गुमाइसकेको छ । आठ जिल्लाका सहरी क्षेत्रमा समेत कांग्रेसको कमजोर नतिजा देखिएको छ । सिरहाको लहान, सप्तरीको राजविराज, महोत्तरीको गौशाला, बर्दिबास र जलेश्वरमा समेत कांग्रेसले जित्न सकेन ।
कुन जिल्लामा कस्तो परिणाम ?
सिरहमा १७ मा दुई
कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवको गृहजिल्ला सिरहाका १७ मध्ये कांग्रेस नवराजपुर गाउँपालिका र कल्याणपुर नगरपालिकामा मात्रै विजयी भयो । हारेकामध्ये पनि कांग्रेस उम्मेदवार अधिकांशमा दोस्रोसमेत हुन सकेन । सिरहा नगरपालिका प्रमुखमा कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवका छोरा डा. सुभाषचन्द्र तेस्रो हुन पुगे ।
धनुषाको १८ मा सात
प्रभावशाली नेताहरूको जिल्ला धनुषामा कांग्रेसले १८ मध्ये सात स्थानीय तहमा मात्र जित निकाल्न सक्यो । तालमेल गरिएको मिथिलामा समेत कांग्रेस जित्न असफल भयो । एमाले उम्मेदवार झन्डै १६ सय अन्तरले विजयी भए । केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादव मतदाता रहेको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा कांग्रेस संघीय समाजवादी फोरमसँग पराजित हुन पुग्यो । कांग्रेसले क्षिरेश्वर, कमला, धनुषाधाम, नगराइन नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र सबैला नगरपालिका प्रमुख जितेको छ । औरही, धनौजी र जनकनन्दिनी गाउँपालिका जित हात पारेको छ ।
सप्तरीमा १८ मा पाँच
सप्तरीको १८ तहमध्ये कांग्रेसले तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका गरी ५ वटामा मात्र जित्न निकाल्यो । बेल्ही चपेना, अग्रीसाइर कृष्णासवरण, विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कांग्रेसले जित्यो । सप्तरीका शम्भुनाथ र सुरंगा नगरपालिका प्रमुखमा मात्र जित्यो ।
महोत्तरी १५ मा तीन
महोत्तरीका १५ तहमध्ये कांग्रेसले तीनवटा तहमा मात्रै जित हात पारेको छ । औरही र बलवा नगरपालिका प्रमुख जित्यो भने लोहरपट्टी गाउँपालिकामा भने अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै जित्न सफल भयो ।
सर्लाहीमा २० मा पाँच
कांग्रेसले सर्लाहीको मलंगवा र हरिपुर्वा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख जितेको छ । धनकौल र रामनगर गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जितेको उसले बसबरिया गाउँपालिकाको अध्यक्ष मात्रै जित्यो । हरिवन, लालबन्दी, बरहथवाजस्ता महत्वपूर्ण नगरपालिकामा जित हात पार्न सकेन ।
रौतहटमा १८ मा आठ
रौतहटमा १८ मध्ये कांग्रेसले आठ तह जितेको छ । जसमा ६ नगर र दुई गाउँपालिका छन् । चन्द्रपुर, फतुवा विजयपुर, राजदेवी नगरपालिकाको प्रमुख तथा गढीमाई, परोहा, वृन्दावन नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै जितेको छ । दुर्गाभगवती र राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा उसले सफलता पाएको छ । शीर्ष नेताहरू नभएको रौतहटमा कांग्रेसले राम्रै सफलता पाएको छ ।
बारामा १६ मा चार
बारामा १६ स्थानीय तह छन् । जसमध्ये कांग्रेसले पाँचवटामा जित दर्ता गरेको छ । निजगढ, सिम्रौनगढ नगरपालिकामा प्रमुख मात्रै जितेको कांग्रेसले महागढीमाई नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै जितेको छ । करैयामाई गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा जित हात पारेको छ ।
पर्सामा १४ मा तीन
पर्सा जिल्लामा पनि कांग्रेस कमजोर देखिएको छ । पर्सामा कांग्रेसले धोविनी गाउँपालिका अध्यक्ष र पर्सागढी, बहुदरमाई नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा जिते हात पारेको छ । पर्सा केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालको गृहजिल्ला हो ।
by यूस नेपाल न्युज	 July 17, 2018
by यूस नेपाल न्युज	 June 7, 2018